घान्द्रुक जीप दुर्घटनामा अस्ताएका पन्तले सानैमा बुबा र दाईलाई पनि सवारी दुर्घटनामै गुमाएका थिए ! – Online Khabar 24
घान्द्रुक जीप दुर्घटनामा अस्ताएका पन्तले सानैमा बुबा र दाईलाई पनि सवारी दुर्घटनामै गुमाएका थिए !
गोरखा : सानै उमेरमा बाबु आमा र दाई गु’माएका गोरखा स्याउली बजारका २३ बर्षिय बिनय पन्तले पनि सं’सार छाडे’का छन् ।
सोमबार घान्द्रुक घुम्न जाने क्रममा उनि सहित ८ जनाले जीप दुर्घ’ट’नामा ज्या’न गु’माएका हुन् । उनको मंगलबार आँबुखैरेनी स्थित अन्त’यष्टि गरिएको छ ।
बच्चा देखि बुढा सम्मका ब्यक्ति माझ प्यारो नाम थियो बिनय पन्त । सानै देखि मिजासिलो सहयोगी चाडैं सबै संग घुलमिल हुने स्वभावका बिनय सबैलाई रुवा’एर यस संसारबाट बि’दा भए । स्थायी घर गोरखा भएका बिनय न्युरोड काठमाडौंमा अंकलको होलसेल पसल सञ्चालन गरेर गोङ्गबु काठमाडौंमा बस्दै आएका थिए ।
दशै नजिकिदै थियो साथिहरु सङ्ग घम्ने भनेर असोज २४ गते पोखरा गएका थिए पोखरामा सबै साथिहरु सङ्ग भेट गरेर घान्द्रुक घम्ने भनेर गाडि रिजर्भ गरेर उतै हानिए दशैँको बिदामा घुम्न गएका उनी सहित ८ जनाको जिवनमा २५ गते दिउँसो २ः३० बजे का’लो दिन बनेर आयो ।
उनी सहित सवार ९ जनाको गाडि भि’रबाट २०० मिटर तल ख’स्यो र उनी सहित ८ जनाले प्रा’ण त्या’गे । १ जना बाँच्न सफल भए । उनको पो’ष्टमा’र्टम भएपछि मंगलबार आँबुखैरेनी स्थित दरौदीँ नदी किनारमा दा’हसं’स्का’र गरिएको छ ।
उनका साथी लक्ष्मण काप्रीका अनुसार बिनय एक टु’हु’रो युवा थिए सानोमा आमा’ले छो’डेर गएको र उनका दाई र बुबाको समेत पहिले नै सवारी दु’र्घट’नामा परि मृ’त्यु भएको थियो । सानै देखि बुबा र आमाको माया नपा’एका बिनय ३ जना दाईहरुको काखमा हुर्किएका थिए ।
निकै इमानदार र मिजासिलो स्वभावका केही काम गर्न पनि पछि नहट्ने खालका थिए । बिनयको मृ’त्युको खबरले गाउँ शो’का’कुल छ । यो खबर साैराह अनलाइनमा छ । यता दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका २४ वर्षीया सुजा चौधरी बिएससी नर्सिङ चौथो वर्षमा अध्यनरत थिइन्।
Prevटिकटकबाट १ अर्ब ३० करोड नेपाली कमाई, यी हुन् सबै भन्दा धेरै कमाउने व्यक्ति [ सूचीसहित ]
nextकुकुरले पुच्छर हल्लाउनुका रोचक कारण यस्तो छ !